Internet Download Manager 6.12 Beta Build7~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Internet Download Manager » Internet Download Manager 6.12 Beta Build 7
By နေမင်းမောင်10:35 PM16 comments
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Internet Download Manager မှာ နောက်ဆုံး Update လေးဖြစ်တဲ့ 6.12 Build7Beta လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်နေ့က 6.12 Build7ထွက်ပြီးပါပြီ။ IDM ကိုတော့ ကျွန်တော် Update ဖြစ်တိုင်းနောက်မကျအောင် တင်တင် ပေးသွားမှာပါ။ အခုရက်ပိုင်းကတော့နည်းနည်းလေး ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာ.။ အခုလည်း IDM ကို Install လုပ်ရတာအဆင်မပြေသူများအတွက် ဒီလင့်ခ်လေး မှာရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 4.6 MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက် ပါဗျာ။
ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေး ထားပါတယ်. အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေး ကနေသာ ယူသွားလိုက် ပါဗျာ..
Downloading from filecloud.io
cyberboy262 July 31, 2012 at 5:57 AM
cyberboy262 July 31, 2012 at 6:01 AM
lional July 31, 2012 at 5:12 PM
thanksalot brother .
phone win July 31, 2012 at 11:35 PM
မင်္ဂလာပါ အကိုနေ ကျနော်ကတော် ညံသထက်ညံပြန်ပြီး သူများတကားထက်ကိုဆိုတယ် keygen file ကိုပျောက်နေတယ် laptop တခုလုံးလည်းနုံသွားပြီး ရှေ့ကိုတိုမရဖြင်နေတယ် အကို၇ဲစေတနာ တကယ်ကိုမြင့်မြတ်ပါတယ် အားလပ်သည်အချိန်ကလေးများရှိရင် ဖြေပြေပါနော် အမြဲေ၇ာက်ဖြင့်တယ် ညီလေးနေဝင်းဦး
Naing Ko August 9, 2012 at 7:04 AM
Phyo Lay August 9, 2012 at 7:12 AM
အကို ကျွန်တော့ စက်ထဲမှာIDM ကို သုံးမရဖြစ်နေတယ် Register လုပ်ဖို့ပဲ တောင်းနေတယ် unistall လုပ်ပြီးပြန်ဒေါင်းလည်းအဲလိုပဲ ဖြစ်နေတယ် ကူညီပါအုံး သုံးတာ သိပ်မကြာသေးတော့ မတတ်သေးဘူး အကို ကူညီအုံးနော် ကျေးဇူးပါ
Anonymous August 15, 2012 at 11:42 AM
down သွားပါတယ်ဗျာ...ကျေးဇူးပါအကိုရေ...အောင်မြင်ပါစေဗျာ =)
DENNIS August 21, 2012 at 5:12 PM
thank you so much bro/
Anonymous August 26, 2012 at 8:07 AM
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်..စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ.ပါစေ.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုနေမင်းမောင် အစ်ကို လိုမျှဝေ ပေးတတ်တဲ့လူ တွေများများ ပေါ်ထွက်နိုင် ပါစေဗျာ အစ်ကို လည်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ ဗျာ
Stuart September 15, 2012 at 12:58 AM
Thks u for share
Maximum PC 2012
Gmail Notifier Pro 4.3 Multilanguage
Activators For Window Xp,Vista & 7
Advanced SystemCare Pro 5.4.0.257 ( 30.07.2012)
Wise Care 365 PRO 1.77.133
Nero 11 Fully Activated
Windows XP Professional SP-3(x86) !ntegrated Jul...
WebShot 1.8.8.1 + Portable